TSY FITANDREMANA SY OLANA ARA-TEKNIKA Maromaro ny lozam-pifamoivoizana niseho tato ho ato – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:48
Ilay fiara nikasa handevina tra-doza tao Amboanana Arivonimamo
Accueil/Fanadihadiana Manokana/TSY FITANDREMANA SY OLANA ARA-TEKNIKA Maromaro ny lozam-pifamoivoizana niseho tato ho ato
Na efa manao izay hafany amin’ny fampitandremana sy ny fametrahana ireo karazana toromarika tokony harahin’ny mpamily sy ny tompon’ny fiara, aza ireo tompon’andraikitra samihafa misahana ny fitaterana an-tanety, dia tsy ny vokatra tsara avy amin’izany no hita, fa ny mifanohitra amin’izany indray.
Stanislas R. 11 août 2021
Tato ho ato, maro ireo lozam-pifamoivoizana niseho, indrindra amin’ny lalam-pirenena, aterak’ireo fiara mpitatitra sy fiarabe, fa eo koa ny afitsoky ny fiara an’olon-tsotra. Vokatry ny tsy fitandremana sy olana ara-teknika avokoa, ny ankamaroan’ny loza miseho, raha ny fantatra. Vao ny alin’ny alatsinainy hifoha talata teo, ohatra no nisiana lozam-pifamoivoizana nahafatesana lehilahy iray 58 taona, tao amin’ny Kaominina Amboanana Arivonimamo, amin’iny lalam-pirenena voalohany. Fiara mpitatitra iray nikasa hamita fandevenana io niharam-boina io, ary ny vadin’ny maty no voalaza fa nindaosin’ny fahafatesana tamin’izany. Sendra niantsona teo an-tsisin-dalana iny ity fiara, nohon’ny olana ara-teknika niseho, no sendra nihemotra tampoka ka nivarina tany anaty hantsana.
Nisesy ny loza…
Ilay fiarabe namono mpianaka tetsy Andohatapenaka
Fa azo lazaina ho nisesisesy ny lozam-pifamoivoizana tato ho ato, anisan’izany ny nahafatesan’ireo mpianaka teny Andohatapenaka, tamin’ny fiandohan’ny volana aogositra teo. Zazavavy kely 2 taona io nindaosin’ny fahafatesana niaraka tamin’ny dadafarany, vao 16 taona monja ity koa. Mpivarotra vary amin’anana eny amin’ny « gare routière Maki » eny Andohatapenaka, ny Ray aman-drenin’ity zaza ity, ary matetika no mitondra azy mandehandeha io havany io. Tampoka anefa, nahare resaka teny an-toerana ireo nahitany masoandro fa misy loza mahatsiravina tsy lavitra teo, ary mba nirohotra nijery izany loza izany koa ireto nahitany masoandro, no ketraka tanteraka, fa ny zanak’izy ireo ihany no voadonan’ny kamiao mpitondra fasika sy biriky. Nandona mpitondra bisikileta, avy eo nifaoka azy mianaka ireto teny amin’ny sisin-dalana io kamiao io, raha ny zava-nisy hitan’ny nanatri-maso. Nitolo-batana teny anivon’ny mpitandro filaminana ilay nahavanon-doza, tamin’izay.
Pretra iray matin’ny lozam-pifamoivoizana…
Ilaina hatrany ny mijirika fiara alohan’ny handehanana lavitra
Fa anisany nitàna ny sain’ny maro ihany koa, ny amin’ilay Pretra diôsezianina niasa teto amin’ny diosezin’Antananarivo, teny Isotry. Nikasa hamonjy fety tany Antsapandrano Ambatolampy, izy sy ireo mpiara-dia taminy tamin’ny faran’ny volana jolay lasa teo, no niharan’ny lozam-pifamoivoizana, ary nindaosin’ny fahafatesana tsy nialana nenina akory. Miisa efatra izy ireo no tao anaty fiara, Pretra roa, ary Seminarista roa lahy hafa tao aoriana. Tapa-tanana io Pretra namany niara-dia taminy io, ary efa nahazo fitsaboana, raha tsy nisy naninona kosa, ireo mpianatra ho Pretra. Vokatry ny fahavakisan’ny kodiarana aoriana iray teny am-pandehanana mafy, no nahatonga ny loza, raha tsiahivina.